06:11:48 am 18-Jan-2022
जित हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने अरुको क्रोध शान्त पार्नुस्
तपाईंको कारणले दोस्रो व्यक्ति चिढिने अवस्था देखा पर्न सक्छ । नियमले खेलाडि बनेपछि तपाईं उसको आँखाको काँडा बन्न सक्नुहुन्छ । स्मार्ट व्यक्तिलाई कसैले पनि मन पराउँदैन । तपाईं पनि यस्तो मानिन सक्नुहुन्छ । उसले तपाईंलाइ आक्रमण गर्न सक्छ । अब तपाईंले उसको क्रोध कसरी शान्त पार्नुहुन्छ ?
पहिले त तपाईंले क्रोधको किसिम थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । यी दुई प्रकारका हुन्छन् :
– जायज क्रोध
– रणनीतिक क्रोध
यदि तपाईंको ध्यान अन्यत्र गएको बेलामा तपाईंले आफ्नो गाडीको पाङ्ग्रा दोस्रोको खुट्टामाथि चढाइदिनुभयो भने ऊ क्रोधित हुनु स्वाभाविक र जायज छ । यस स्थितिमा तपाईं के गर्नुहुन्छ ? तपाईं कारबाट बाहिर निक्लिनुहुन्छ तथा माफी माग्नुहुन्छ । उसको जायज क्रोधलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ । तपाईंले जे गल्ती गर्नुभयो त्यसको बारेमा सुन्नुहोस् । पुनः माफी माग्नुहोस् तथा समस्याको समाधान खोज्नुहोस् ।
वास्तवमा रणनीतिक क्रोध विल्कुल फरक मामिला हो । रणनीतिक क्रोधको प्रयोग तपाईंलाई यस्तो काम गराउनको लागि गरिन्छ, जसलाई तपाईंले गर्न चाहनुहुन्न । व्यक्ति तपाईंमा दबाब दिनको लागि क्रोधित हुन्छ । यदि तपाईं दबाबमा आउनुभयो भने उसले तपाईं तथा दोस्रो अगाडि पनि यसो गर्न सक्छ । तपाईंले यो कार्यलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ । यसको लागि तपाईंले भन्न सक्नुहुन्छ ‘मलाई कसैले कराएको, धम्की दिएको, दबाएको, आदि ठीक लाग्दैन । अतः यदि तपाईं शान्त हुनुहुन्न, यसलाई बन्द गर्नुहुन्न तथा आफ्नो मुक्कालाई तल झार्नुहुन्न भने म बाहिर जानेछु ।
यदि उसले यसपछि पनि मान्दैन भने बस तपाईं त्यहाँबाट जानुहोस् । यदि तपाईंले केही नभन्नुहोस्, बस कोठाबाट बाहिर निक्लिनुहोस् । यदि तपाईंले पटकपटक यसो गर्नुभयो भने उसलाई तपाईंको सन्देश प्राप्त हुनेछ ।
साभार : ‘तपाईंको जीत’ पुस्तकबाट